Myanmar Monk Student Association: March 2012
Universities in Thailand by 2012 University Web Ranking
1 Chulalongkorn University
2 Kasetsart University
3 Thammasat University
6 Mahidol University
7 Chiang Mai University
8 Naresuan University
9 Rajamangala University of Technology Lanna
10 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
11 King Mongkut's University of Technology Thonburi
12 Asian Institute of Technology
13 Ramkhamhaeng University
14 Srinakharinwirot University
15 Suranaree University of Technology
16 Assumption University of Thailand
17 University of the Thai Chamber of Commerce
18 Mahasarakham University
19 Silpakorn University
20 Burapha University
21 Rajamangala University of Technology Isarn
22 Bangkok University
23 Ubon Ratchathani University
24 Rajamangala University of Technology Thanyaburi
25 Mahanakorn University of Technology
26 Sripatum University
27 Nakhon Phanom University
28 Mahachulalongkornrajavidyalaya University
29 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
30 Chiang Mai Rajabhat University
31 Rajamangala University of Technology Tawan-ok
32 Maejo University
33 Suan Dusit Rajabhat University
34 King Mongkut's University of Technology North Bangkok
35 Mae Fah Luang University
36 Rajabhat Mahasarakham University
37 Suan Sunandha Rajabhat University
38 Payap University
39 Walailak University
40 Dhurakij Pundit University
41 Nakhon Pathom Rajabhat University
42 Rangsit University
43 Huachiew Chalermprakiet University
44 National Institute of Development Administration
45 Thaksin University
46 Siam University
47 Webster University Thailand
48 Lampang Rajabhat University
49 Mahamakut Buddhist University
50 Uttaradit Rajabhat University
51 North Eastern University
52 Dhonburi Rajabhat University
53 Rajamangala University of Technology Krungthep
54 Kasem Bundit University
55 Rajamangala University of Technology Srivijaya
56 Sisaket Rajabhat University
57 Rajamangala University of Technology Ratanakosin
58 Hatyai University
59 Eastern Asia University
60 Asian University
61 Vongchavalitkul University
62 Krirk University
63 South-East Asia University
64 Christian University of Thailand
65 North Chiang Mai University
66 Stamford International University
67 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Phra Nakhon Si Ayutthaya ...
68 Rattana Bundit University
69 The University of Central Thailand
70 Princess of Naradhiwas University
71 Chaopraya University
72 Yala Islamic University
73 Ratchathani University
74 Thonburi University
75 Chiang Rai Rajabhat University
76 Saint John's University
77 The Far Eastern University
78 Shinawatra University
79 Western University
80 Pathumthani University
81 Asia-Pacific International University
82 Nation University
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Saturday, 31 March 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ပညာရေးသတင်း |
World's top 100 universities (2012)
1 Harvard University United States 1
2 Massachusetts Institute of Technology United States 2
3 University of Cambridge United Kingdom 3
4 Stanford University United States 5
5 University of California, Berkeley United States 4
6 University of Oxford United Kingdom 6
7 Princeton University United States 7
8 University of Tokyo Japan 8
9 University of California, Los Angeles United States 12
10 Yale University United States 9
11 California Institute of Technology United States 10
12 University of Michigan United States 13
13 Imperial College London United Kingdom 11
14 University of Chicago United States 15
15 Columbia University United States 23
16 Cornell University United States 16
16 University of Toronto Canada 17
18 Johns Hopkins University United States 14
19 University of Pennsylvania United States 22
20 Kyoto University Japan 18
21 University College London United Kingdom 19
22 Swiss Federal Institute of Technology Zürich Switzerland 24
23 University of Illinois at Urbana Champaign United States 21
23 National University of Singapore Singapore 27
25 University of British Columbia Canada 31
25 McGill University Canada 29
27 University of Wisconsin-Madison United States 25
28 University of Washington United States 26
29 London School of Economics and Political Science United Kingdom 37
30 Tsinghua University China 35
31 University of California, San Francisco United States 34
32 University of Texas at Austin United States 31
33 Duke University United States 36
34 New York University United States 51-60
35 Northwestern University United States 40
36 University of California, San Diego United States 30
37 Carnegie Mellon University United States 28
38 Peking University China 43
39 The University of Hong Kong Hong Kong 42
39 University of Massachusetts United States 19
41 Georgia Institute of Technology United States 39
42 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 48
43 University of Melbourne Australia 45
44 Australian National University Australia 51-60
44 University of California, Davis United States 38
46 University of North Carolina at Chapel Hill United States 41
47 University of Minnesota United States 43
47 Purdue University United States 47
49 University of Edinburgh United Kingdom 45
50 The University of Sydney Australia 51-60
51-60 Delft University of Technology Netherlands 49
51-60 Karolinska Institute Sweden 51-60
51-60 University of Manchester United Kingdom 61-70
51-60 The Ohio State University United States 51-60
51-60 Osaka University Japan 50
51-60 Pennsylvania State University United States 61-70
51-60 University of California, Santa Barbara United States 51-60
51-60 Seoul National University Korea, Republic of 51-60
51-60 Tohoku University Japan 51-60
51-60 Tokyo Institute of Technology Japan 51-60
61-70 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 71-80
61-70 Hebrew University of Jerusalem Israel #N/A
61-70 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 91-100
61-70 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 71-80
61-70 King's College London United Kingdom 61-70
61-70 Technische Universität München Germany 61-70
61-70 University of Pittsburgh United States 51-60
61-70 University of São Paulo Brazil #N/A
61-70 University of Southern California United States 71-80
61-70 National Taiwan University Taiwan 81-90
71-80 University of Amsterdam Netherlands 81-90
71-80 Universität Heidelberg Germany 81-90
71-80 Michigan State University United States 71-80
71-80 Université Paris-Sorbonne France #N/A
71-80 The University of Queensland Australia Australia 81-90
71-80 Texas A&M University United States 81-90
71-80 Uppsala University Sweden 61-70
71-80 Utrecht University Netherlands 71-80
71-80 Washington University in St Louis United States 71-80
71-80 University of Zürich Switzerland 61-70
81-90 Brown University United States #N/A
81-90 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong #N/A
81-90 University of Florida United States 61-70
81-90 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 81-90
81-90 Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea, Republic of 91-100
81-90 University of Leeds United Kingdom 81-90
81-90 Leiden University Netherlands 81-90
81-90 Lund University Sweden 71-80
81-90 Nanyang Technological University Singapore 91-100
81-90 Tel Aviv University Israel #N/A
91-100 University of Arizona United States 71-80
91-100 Boston University United States 61-70
91-100 University of Bristol United Kingdom 81-90
91-100 École Polytechnique France 61-70
91-100 Indiana University United States 81-90
91-100 Middle East Technical University Turkey #N/A
91-100 Université Paris-Sud France #N/A
91-100 Université Pierre et Marie Curie France #N/A
91-100 Rutgers, The State University of New Jersey United States 71-80
91-100 Wageningen University and Research Center Netherlands #N/A
Their reputations ranked by Times Higher Education!
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်ငွေကြာယံသံဃာတော်များအား အရှင်ဝီရသူ တွေ့ ဆုံ
မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ မနက်က ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဟာ ရန်ကုန်မြို့ ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အရှင်ဝီရသူ နှင့် တွေ့ ဆုံဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ အရှင်ဝီရသူ ဟာ ငွေကြာယံစာသင်တိုက်မှ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ရဟန်းတော်များနဲ့ လည်း သွားရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Friday, 30 March 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဘာသာရေး |
နေအိမ်အတွင်း ဗလီဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းသည့်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံများ ဝိုင်းဝန်းဖြိုဖျက်
By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဘုရားနီ ဘုရားအနီးရှိ အိမ်တအိမ်အတွင်း ဗလီ ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးစားသည့်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံ လူဦးရေ တသောင်းခွဲ ဝန်းကျင်ခန့် လာရောက် ဖြိုဖျက်နေသည်လို့ မြို့ခံပြည်သူတဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို သတင်းပေးပို့ပါသည်။
အခုလိုဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာအပေါ် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ပြောနေကြတာကတော့ “ အရင်တုန်းကတည်းက ကျောက်ပန်းတောင်းက လူမျိုးခြားကုလား လက်မခံတဲ့ မြို့ ဖြစ်တယ်၊ ညအိပ်ညနေတောင် လက်မခံဘူး။ အပြင်ဘက်မှာ ထွက်နေတဲ့အသံက ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ ကုလားတွေ ဗလီ ဆောက်တယ်ဆိုပြီး သတင်းရလို့ မြို့ခံတွေ စုပေါင်းပြီး ဝင်ဖျက်နေတာ၊ လူထုက တသောင်းခွဲလောက် ရှိတယ်၊ ကားအစီး ၁၀၀ လောက် ရှိသွားပြီ၊ တကယ်က ကုလားနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ အသံထွက်နေတာ” ဟု မြို့ခံ တဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
“ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ မြို့လူထုရော သံဃာရော လက်မခံတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗလီဆိုတာ မရှိဘူး။ အဲဒီအိမ်မှာ ဗလီ ခိုးဆောက်တယ်ဆိုပြီး အရင်သုံးလေးနှစ်တုန်းက ပြဿနာ တခါဖြစ်ပြီးပြီ။ အခုထပ်ပြီး အဲဒီအိမ်မှာပဲ ကုလားတွေက ကန်ထရိုက်ငှားပြီး ဗလီ ခိုးဆောက်တဲ့အတွက် အိမ်ကို ဝိုင်းဖျက်နေကြတာပါ။ အခုကိစ္စက ကျန်တဲ့ ပယောဂ မပါဘဲ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံတွေရဲ့ ဆန္ဒအရ ဖြစ်တာဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ မှားတယ် မှန်တယ်လို့ ဦးဇင်းအနေနဲ့ မပြောချင်ပါဘူး” ဟု ကျောက်ပန်းတောင်းမြိုခံ သံဃာတပါးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
ဒီကနေ့ ည ၉း၀၀ နာရီအချိန်မှာတော့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံလူထုဟာ အဆိုပါအိမ်ကို ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီးနောက် လူစုကွဲသွားကြပါသည်။ အဲဒီလိုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက အဆိုပါ အိမ်အနီးအနားတွင် လာရောက်စောင့်ကြပ်နေသည်ကို တွေ့ရတယ်ဟု မြို့ခံတဦးက ပြောပါသည်။
ထားဝယ်ဒေသတွင် ထိုင်းလူမျိုးများပိုမို အခြေချလာမည့်အရေး ဒေသခံများစိုးရိမ်
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ဒေသတွင် ထိုင်းစီးပွားရေး သမားများမှ အိမ်ခြံမြေဈေး အဆမတန် ပေးဝယ် နေသည့်အတွက် အနာဂတ်တွင် ထိုင်းလူမျိုးများ အခြေချနေထိုင်လာမည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေသည်ဟု ထားဝယ်မြို့ခံ တဦးကပြောသည်။
“အရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်း အခုဈေးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူး၊ စီမံကိန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ခြံမြေ အရင်က တစ်သောင်း တန် အခု သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်တန်သွားတယ်၊ မရောင်းချင်လို့အဆမတန်ခေါ်ရင်လည်း ၀ယ်သွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မပျော်ဘူး ရင်ပူနေတယ်၊ ထားဝယ်မြို့ အတွက်လည်း အန္တာရယ်အငွေ့အသက်ကို ရှူနေရ သလို ဘဲခံစားရတယ်။ တချို့ လူတွေဆိုရင် ပိုက်ဆံလွယ်လွယ်ရတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်။ နောင်ရေးကို မစဉ်းစား ကြဘူးလေ”
ထားဝယ်မြို့ ၀ဲကျွန်း (ခေါ်) လက်ဝဲကျွန်းရပ်ကွက်တွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းသို့သွားသော လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အိမ်ခြံမြေများကို စီးပွားရေးသမားများနှင့် ထိုင်း (ယိုးဒယား) နိုင်ငံသားများမှ ၀ယ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထားဝယ်စီမံကိန်းအတွက် ရောက်ရှိနေကြသည့် ထိုင်းလူမျိုးများက မြန်မာကုမ္ပဏီများမှတဆင့် ၀ယ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဈေးကောင်းရသဖြင့် ဆင်းရဲသော ဒေသခံများက ရောင်းချခဲ့ကြသည်။
ယင်းသို့ ၀ယ်ယူနေသည့်အတွက် အိမ်ခြံမြေ ဈေးများ အဆမတန် ထိုးတက်လာပြီး နောင်တချိန်တွင် ဆင်းရဲသား ဒေသခံများ ၀ယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ထားဝယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အခုလို ပြောသည်။
“ဒီက ဒေသခံတွေဆိုရင် ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စားတွေ များတယ်။ အိမ်ခြံမြေ မပိုင်ဆိုင်တဲ့ မိသားစုတွေရှိတယ်။ ဒီတော့ အခုလိုဈေး တက်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီမိသားစုတွေအတွက် အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာက ပိုခက်သွားလိမ့်မယ်။”
လောလောဆယ်တွင် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်နေသည့်အတွက် ထားဝယ်ဒေသအတွင်းသို့ ထိုင်းကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများ ပိုမိုဝင်ရောက် လာကြကြောင်း သိရသည်။
အရှေ့တောင် အာရှတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းကို ထိုင်း- အီတာလျံ ကုမ္ပဏီ နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ အကြား ၂၀၀၈ မေလတွင် သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
၎င်းစီပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းတွင်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းအပြင် ထိုင်း- မြန်မာ ရှစ်လမ်းသွား ကားလမ်း ၊ မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၊ အထူးစီပွားရေးဇုန် နှင့် စက်မှုဇုန်တို့ပါဝင်သည်။
အကြောင်းအရာ ။ ။ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးနှင့်ကော်မတီအသစ်ရွေးကောက်ပွဲးကြီးပြီးဆုံးခြင်း။ (၂၅.၃.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Mahamakut Buddhist University၌ ထိုင်းနိုင်ငံသာသနာပိုင် ကျောင်းဖြစ်သည့် ထိုင်းဘုရင်၏ အမတော် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားသော ခန်းမကြီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသာသနာပိုင်အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးများကလည်း ကြည်ဖြူစွာလက်ခံကူညီခဲ့ကြပါသည်။၄င်းရွေကောက်ပွဲဝင်အကြောင်းရာများကိုအသေးစိတ် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ဗီဒီိယိုမှတ်တမ်းများ
နှင့်အတူတင်ပြပေးသွားပါမည်၊ အသင်း၏ Websiteမှာပြုပြင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ပြန်ကြားရေးဟောင်းဦးပညာစာရမှ အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဘုရား Websiteမှာ မကြာမြှီပီးစီးတော့မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် M.S.M.O Website ကြီးမှာစည်းကားစွာ
တင်ပြပေးသွားပါမည်ဘုရား၊ လက်ရှိမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအရာများကို အကြမ်းပျဉ်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါသည်ဘုရား။
အပြည့်အစုံကို Website ပြီးသည်နှင့် ဗဟိုကော်မတီအသစ်ပြန်ကြားရေးဆရာတော်များနှင့်တွဲ၍ ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်ဘုရား။
၅။အတန်းအသီးသီးမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောကော်မတီလောင်းများအားဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် မဲဆန္ဒများနှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း။
၁၀။ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းနားကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းပြုလုပ်ခဲ့သောအသေးစိတ်မှတ်တမ်းများကိုမကြာမှီ
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် (၁၀၀) စာရင်း ထုတ်ပြန်
ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ Times Higher Education အဖွဲ့ကြီးက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းကို မကြာခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၉ နိုင်ငံက ပညာရှင် ၁၇၅၅၄ ဦးနဲ့အတူ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ စစ်တမ်းနဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ထိပ်ဆုံး တက္ကသိုလ် ၁၀၀ မှာ အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တွေ အများဆုံးပါဝင်ပြီး၊ ဒုတိယ အများဆုံးက အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တွေပါပဲ။ ထူးခြားမှုက ဒီနှစ်မှာ အာရှတက္ကသိုလ် တော်တော်များများ ရှေ့တန်းတက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ ဟားဗတ်က (၁)၊ MIT က (၂)၊ စတန်းဖို့ဒ်က (၄)၊ ဘာကလေ (၅)၊ ပရင်စတန် (၇)၊ ယေးလ် က (၁၀) ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်ရဲ့ ကိန်းဘရစ်က နံပါတ် (၃) မှာရှိပြီး၊ အော့စ်ဖိုဒ့် (၄) မှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တော်တော်များများ မနှစ်က အဆင့်ထက် အနည်းငယ်စီ ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ဂျပန်တက္ကသိုလ် ၅ ခု ပါဝင်ပြီး၊ တိုကျို တက္ကသိုလ်က မနှစ်က နံပါတ် (၈) နေရာကို ဆက်ထိန်းထားပါတယ်။ နယ်သာလန် တက္ကသိုလ် ၅ ခုလည်း ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
တရုတ်က စင်ဝှာ တက္ကသိုလ်က မနှစ်က အဆင့် (၃၅) ကနေ ဒီနှစ် အဆင့် (၃၀) ကို တက်လာပါတယ်။ ပီကင်း တက္ကသိုလ်က အဆင့် (၄၃) ကနေ (၃၈) ကို တက်လာပါတယ်။ ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်က အဆင့် (၄၂) ကနေ ဒီနှစ် (၃၉) ကို ရောက်လာပါတယ်။
စင်္ကာပူအမျိုးသား တက္ကသိုလ်က မနှစ်က အဆင့် (၂၇) ကနေ၊ ဒီနှစ် (၂၃) နေရာကို ရောက်လာပါတယ်။
ချုပ်ပြောရရင် ကမ္ဘာ့ပညာရေးဟာ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေသလို၊ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဟာလည်း ထိပ်ဆုံးနေရာကို တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အပြိုင်လုနေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် ၁၅၉ ခုကတော့ တစ်ခုချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင် ၀ဘ်ဆိုဒ်တောင် မရှိသေးတဲ့အတွက်၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် (၄၀၀) အဆင့်ဝင်ဖုိ့တောင် အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အလံနှင့် ရခိုင်ဝတ်စုံ ပြင်ဆင်ရန် ကြံ့ဖွံ့က ရခိုင်လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်
မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အထူး အစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အလံနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားဝတ်စုံကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီမှ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
"ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မာန်အောင်မြို့နယ် အမတ်လည်းဖြစ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဦီးသာညွန့်က ခေတ်စနစ်နဲ့ မလျော်ညီတဲ့ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အလံနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား ၀တ်စုံ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် အဆို တင်ပါတယ်။ ဒါကို ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌကနေပြီး ဒီအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက် စရာရှိသလားလို့ မေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်က အခုအချိန်မှာ အလံတွေ၊ အမျိုးသား ၀တ်စုံ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မဟုတ်သေးတဲ့ အတွက် ကန့်ကွက်ကြောင်း တင်တဲ့ အခါ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့က ၂၈ မဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ရတပပါတီက ၁၄ မဲ၊ ကြားနေမဲ တစ်မဲနဲ့ ကြံ့ဖွံ့က အနိုင်ရသွားပါတယ်" ဟု ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ က ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် ၁၃ မဲသာ ရှိသော်လည်း တပ်မတော်သား ၁၅ မဲက ကြံ့ဖွံ့ အဆိုကို ထောက်ခံသဖြင့် ကြံ့ဖွံ့ အဆိုမှာ ၂၈ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။
" လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာတော့ ပြည်နယ်အလံနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား ၀တ်စုံ ပြင်ဆင် အတည်ပြုရေး ကော်မီတီိကို ဖွဲ့စည်းရေး အတွက် သူတို့ဘက်က အဆို တင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခါ ပြင်ဆင်၊ အတည်ပြုရေး ကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲခွဲရပါအုံးမယ်" ဦးအောင်မြကျော်က ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ၏ သဘောထားကို မေးမြန်းရာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သူ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ယခုလို ပြောသည်။
" သူတို့က ဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာတင်တာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အလံ၊ ရခိုင်အမျိုးသား ၀တ်စုံတွေကို ခေတ်စနစ်နဲ့ မလျော်ညီတဲ့ အတွက် ပြန်လည် ဆန်းစစ်ပြီး ပြုပြင်ဖို့ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က အဆိုတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလိုတာက ရခိုင်ပြည်နယ် အလံဆိုတာ မဆလ ခေတ်က ပြုလုပ်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ရခိုင်ပညာရှင်တွေနဲ့ အနှစ်နှစ်အလလ တိုင်ပင်ညှိနိုင်းပြီး အချိန်ယူပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပြည်နယ် အလံ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အ၀တ်အစားဆိုတာကလည်း ရှေးပဝေသဏီကတည်း ၀တ်စား ဆင်ယင် လာတဲ့ ရခိုင် အမွေအနှစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလံပေါ်မှာလည်း ရခိုင်အမျိုးသား သင်္ကေတ သီရိဝိစ္ဆတံဆိပ်ကို ထည့်ထားပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကလည်း အမျိုးသား လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုတာကို ပြောကြားထားပါတယ်။ အမျိုးသား လက္ခဏာ မပျောက် ပျက်ရေး ဆိုတာမှာလည်း ကိုယ်လူမျိုးနဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ်လူအုပ်စုနဲ့ကိုယ် ရှိနေတဲ့ အမျိုးသား လက္ခဏာတွေကို အစိုး တစ်ခု အနေနဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေနဲ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်နဲ့ ပြင်ဆင်လို့၊ လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ တမျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာလည်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်လို့လည်း မရဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဒီကိစ္စဟာ သာမန်ကာ လျှံကာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ့် သူတွေရဲ့ အမျိုးသား အပေါ် ခံစားချက်၊ ယဉ်ကျေးမူ အမွေအနှစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်မူ သိကျွမ်းမူတွေ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို နားလည်မူ တစ်စုံတရာ မရှိဘဲ၊ တစ်စုံတရာ လက်လှမ်းမမှီဘဲနဲ့ မိမိသဘောနဲ့ မိမိ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ နေ့ တချိန်ချိန်မှာ သမိုင်းမှာ ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကြံ့ဖွံ့မှ အနိုင်ရရှိသွားသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အလံနှင့် အမျိုးသား ၀တ်စုံများကို ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ လာပါက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီအနေဖြင့် မည်သို့ တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်သွားမလဲဟု မေးမြန်းရာ ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ယခုလို ဆက်ပြောသည်။
" ကျွန်တော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ လာမယ့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မြို့ပေါ်က ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဒီကိစ္စ အပေါ် ဘယ်လို မြင်သလဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ပြုပြင်သင့်သလဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နဂိုအတိုင်း ထားသင့်သလား။ ဘာတွေကို ဖြည့်စွက် ပြုပြင်သ့င်သလဲ။ ပညာရှင်တွေရဲ့ သဘောတရား၊ အမြင်၊ အကြံ အဥာဏ်ပေးမူတွေကို ရယူသွားမယ်။ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အလုပ် လုပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်နယ်အလံ၊ အမျိုးသား ၀တ်စုံ ကိစ္စမှာ ရခိုင် တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သဖြင့် အထူး သတိထားရန် လိုအပ်ပြီး ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲမူ လုပ်မည် ဆိုပါကလည်း အသိပညာရှင် အတတ် ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ညှိနိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေတွင် လူကြီးများက ပြောဆိုနေကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
.: နိရဉ္စရာမှ သတင်း
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ယဉ်ကျေးမှု |
ထိုင်းမှာ မြန်မာလုပ်သားများ ကားမှောက်သေ
ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယခရိုင်၊ ဘန့်ဖရဲမြိုနယ် ရဲဂိတ်မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ တ၇ားမ၀င် တင်ဆောင်လာတဲ့ကားကို စစ်ဆေးဖို့လုပ်ချိန်မှာ ကားမောင်းထွက်ပြေးရင်း တိန်းမှောက်သွားလို့ သေဆုံးသူ ဒဏ်၇ာရသူတွေ ၇ှိတယ်လို့ ဘန့်ဖရဲမြို့နယ် ရဲစခန်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ဘီဘီစီကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၇ ယောက်၇ှိပြီး ၊ အဲဒီအထဲမှာ သေဆုံးသူ ထိုင်းအမျိုးသားတစ်ဦ်းပါကာ ကျန် ၆ ယောက်မှာ မြန်မာတွေဖြစ်တယ်။ ဒဏ်ရာ၇သူ ၁၄ ဦင်္းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်အရ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို သေဆုံးသူ ထိုင်းလူမျိုး ကားသမားက မဲဆောက်မြို့ကနေ တ၇ားမ၀င်သယ်ဆောင်လာတာလို့ နယ်မြေခံရဲက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Thursday, 29 March 2012
စကြဝဠာအတွင်း ဂြိုဟ်ကမ္ဘာတွေ အများကြီးရှိနိုင်
ကမ္ဘာထက် အဆပေါင်းများစွာကြီးမားတဲ့ Super-Earth လို့ခေါ်တဲ့ ကျစ်လျစ်တဲ့ ကျောက်မြေထုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မဟာကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါင်း သန်းပေါင်း ထောင်ချီပြီး စကြဝဠာထဲမှာ ရှိနေနိုင်တဲ့ အထောက်အထားသစ်တွေကို တွေ့ရှိထားတယ်လို့ ဥရောပတောင်ပိုင်း ဂြိုဟ်နက္ခတ် စူးစမ်း လေ့လာရေး အဖွဲ့ ESO ရဲ့ အာကာသ သုတေသီတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
မဟာကမ္ဘာ Super-Earth တွေဟာ လူတွေနေထိုင်ရာ နေစကြာဝဠာပြင်ပမှာရှိပြီး သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့သိပ်သည်းဆထက် ဆယ်ဆမက လျော့နည်းပါတယ်။ Red dwarf လို့ခေါ်တဲ့ နေက ပဲ့ထွက်လာတဲ့ ကြယ်အားလုံးရဲ့ ၄၀% လောက်မှာ သူတို့ကို ပတ်ပြီး သွားနေတဲ့ မဟာကမ္ဘာတွေ ရှိနေမယ်လို့ ဥရောပ သုတေသီတွေက တွက်ချက်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သက်ရှိတွေ ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တဲ့ဇုန်ထဲမှာပဲ Orbit ပတ်လမ်းနဲ့ ကြယ်ကို ပတ်နေကြတာပါ၊ ဒီဇုန်ထဲမှာရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တွေပေါ်မှာ ရေရှိနိုင်တဲ့အတွက် သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဂြိုဟ်သားတွေ ရှိနေနိုင်တယ် ဆိုတာကို ပြသတဲ့ အကောင်းဆုံး အထောက်အထားလို့လည်း သုတေသီတွေက ဆိုကြပါတယ်။
တောင်အမေရိကတိုက်ထဲက ချီလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ La Silla လာဆီရာ နက္ခတ္တမျှော်စင်က ဂြိုဟ် နက္ခတ်တွေရှာတဲ့ HARPS ရောင်စဉ်တိုင်း ကိရိယာနဲ့ တိုင်းထွာတွက်ချက်ရာကနေ ဥရောပ သုတေသီတွေ အခုလို အထောက်အထားသစ်တွေကို တွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ Red dwarf လို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်တွေကို ပတ်နေတဲ့ မဟာကမ္ဘာတွေရဲ့ ရွေ့လျားနှုန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တိုက်ရိုက် တိုင်းထွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Red dwarf တွေဟာ သေးငယ်ပြီး နေထက် အပူချိန်လျော့နည်းတဲ့ ကြယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သက်တမ်း သိပ်ရှည်တာမို့ သူတို့ကို အများအပြား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နေစကြာဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ ကြယ်တွေအားလုံးရဲ့ ၈၀% ဟာ Red dwarf တွေမို့ သူတို့ဟာ စုစုပေါင်း ဘီလျံ ၁၆၀ လောက် ရှိနေပါတယ်။
ပဉ္စမ ပါရာဇိကနှင့် ဒေဝဒတ် ဂိုဏ်းသားများ
အခုတလော အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေအပေါ် တက်လာတဲ့ ပုံတွေရယ် အောက်က မှတ်ချက် (Comment) ပေးတာ၊ မေးတာတွေရယ်ကို ကြည့်ပြီး အခုဆောင်းပါးကို ရေးချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ ပုံတွေကတော့ သံဃာတော်တွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်ကြိုဆိုနေတဲ့ပုံတွေပါ။ အောက်ကရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေမှာလည်း ဘာသာရေးအတွက် တကယ်စိုးရိမ်လို့ ရေးတာတွေပါသလို တချို့လည်း တခုခုကိုရည်ရွယ်ပြီး ဝေဖန်ရေးသားတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ကျောင်းက နှင်ထုတ်ခံရမယ် ဆိုတာရော နောက်ပြီး သံဃာတွေ ပါလာတာကို တချို့လည်း ဝမ်းသာအားရ ရေးတာတွေ တွေ့ရတာပါ။ တချို့ကတော့ တော်တော်ကို မုန်းမုန်းတီတီး ရေရွတ်ကြတာကိုတောင် တွေ့ရပြန်တယ်။
သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးထဲပါလာတာ၊ ပိုတိတိကျကျပြောရရင် လက်ရှိ အာဏာရပါတီရဲ့ အတိုက်အခံဘက်ကို လေးလေးနက်နက် ထောက်ခံနေတာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေလို အဖွဲ့အစည်းတွေကို အားပေးထောက်ခံနေတာမှာ ဘာလို့ ဒီလောက် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်နေရတာလဲ။ တကယ် သာသနာကို ကြည်ညိုဟန်နဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးချနေတာကိုကျတော့ အဲဒီဝေဖန်သူတွေက ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပါလို့ မသတ်မှတ်ကြပြန်ဘူး။ ဒါက အကြောင်းမဲ့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သံဃာတွေကို သူတို့လိုသလို အသုံးချနေတယ်ဆိုတာ သက်သေထောက်ပြစရာတွေ အခိုင်အမာရှိနေတာပါ။ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့လိုတဲ့ကိစ္စမှာ အသုံးချဖို့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို အသုံးချတဲ့အခါ သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလို့ မယူဆဘဲ သူတို့ မလိုလားတဲ့အခါမှာ သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိတဲ့ ကိစ္စပါ။
သူတို့ (စစ်တပ်နဲ့ အာဏာရှင် အလိုတော်ရိများ) သတ်မှတ်ထားတဲ့ “နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီး” ဆိုတာကို ရှင်းပါ့မယ်။ ၈၈ ကနေ ယနေ့အထိ သံဃာတွေ တောင်းဆိုနေ၊ ပြောဟောနေတာတွေ အားလုံးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံရေးထဲ ပါဝင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းတာပြောတာ၊ တခါမှကို မတွေ့ရသေးပါဘူး ။ သူတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သံဃာတွေကလည်း ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို ပေးပါပေးပါလို့ ကိုယ်ကောင်းစားရေးကို တောင်းနေသူတွေ တပါးမှမပါဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးလို့ ကျယ်လောင်စွာ အော်နေကြပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ဘုန်းကြီးဆိုတာ ရူးသွပ်နေသူတွေနဲ့ တတန်းတည်း အထားခံနေရတာကိုတောင် သံဃာတော်တွေက နစ်နာတယ်၊ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ မပြောဘဲ ကိုယ့်အရေးကိစ္စကို လျစ်လျှူရှုထားကြသူတွေပါ။ (ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၉ ရဲ့ ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် မရှိသူစာရင်းမှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ ထောင်ဒဏ်ကျခံသူ၊ စိတ်ပေါ့သွပ်နေသူ စသဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။)
ထေရဝါဒတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာမှာ လွှတ်တော်ထဲအထိ သံဃာတွေ ပြောပိုင်ခွင့်ရနေတာ၊ နောက် ကမ္ဘောဒီးယားလို နိုင်ငံမှာ ရရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေဟာ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ မြန်မာဘုန်းကြီးတိုင်း သိနေတာပဲ။ ငါတို့နိုင်ငံမှာလည်း ရသင့်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မက်မက်မောမော ပြောမနေပါဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုအပေါ် အုပ်ချုပ်တဲ့သူက လူပီပီ အုပ်ချုပ်နေရင် ကျေနပ်မယ့် သံဃာတွေချည်းပါပဲ။ ပြည်သူပြည်သား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာသုခရနေရင် ဘယ်သံဃာကမှ အပင်ပမ်းခံ ဝင်ပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မနေ့တနေ့ကမှ ပေါ်လာတဲ့စစ်တပ်တောင် ငါတို့မပါလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး မရမနေကုတ်ကပ် အာဏာကို ဖက်တွယ်နေချိန်မှာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ဘယ်သံဃာကမှ ငါတို့သံဃာတွေလည်း မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိလို့ကိုမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောပြီး အာဏာထဲပါပါရစေလို့ ပြောမနေပါဘူး။ လွှတ်တော်ထဲ ဘယ်လောက်ပါရမယ်လို့များ သံဃာတွေက တောင်းဆိုလိုက်လို့ကတော့ ဘုရားပညတ်ခဲ့တဲ့ လေးပါးသော ပါရာဇိ (သာသနာတော်မှ ဆုံးရှုံးစေတတ်သော အာပတ်။ ကျူးလွန်မိလျှင် လူထွက်ရသော အာပတ်) ကို နောက်တပါးထပ်တိုးပြီး “ပဉ္စမ ပါရာဇိက” ဆိုပြီး အမိန့်နဲ့ထုတ်လိုက်မှာ မြင်ယောင်သေးတော့။
သူတို့လိုပြောကြစတမ်းဆို မြန်မာတွေနဲ့အတူတူ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လူနေမှု ဘဝတခုလုံး တည်ငြိမ်နေအောင် ထိမ်းထားပေးတဲ့အရေးမှာ သံဃာတွေဟာ အဓိကနေရာက ပါနေပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ လူတွေငါးပါးသီလမြဲနေရင် အားလုံးနီးပါး ပြည့်စုံနေပါပြီ။ လူတွေက သူများပစ္စည်းကို လူမသိအောင်ယူမှ ခိုးတယ်ထင်ကြတာ။ ငါးပါးသီလကို သေချာနားလည်ရင် အဒိန္နဒါနာဆိုတာကို၂၅ မျိုးတောင် ပြဆိုထားတာပါ။ အခုခေတ်ပြောပြောနေတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတို့ ဆိုတာ ငါးပါးသီလကို တကယ် လိုက်နာသူတွေအတွက် ရှက်စရာကိစ္စပါ။
ဒါက သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆီက ရလိုက်တဲ့ အသိတရားတခုကြောင့် လူတွေရဲ့ တရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘယ်လောက် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိရအောင် ပြောပြတာ။ ဒီလို ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေက လူနေမှုဘဝကို အများကြီး အကူအညီပေးတာကို လူတွေသိရအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်က အဓိက အရေးပါနေပါတယ်။ လူ့အခွင့်ရေး လူ့အခွင့်ရေးနဲ့သာ ပြောပြောနေတာ အခုအချိန်အထိ မြန်မာပြည်မှာ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ သူတွေကို စာရင်းကောက်ရင် သံဃာတွေက ထိပ်ဆုံးက ခံနေရတာပါ။
ရွှေညဝါ ဆရာတော်၊ အရှင်ဂမ္ဘီရတို့ ကိစ္စတွေကို ကြည့်ရင် ကမ္ဘာကတောင် ထပြောရတဲ့ အခြေအနေ။ ရှက်တတ်ရင် ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါတွေက သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို ခုတုံးလုပ်ပြီး၊ အာဏာရှင်အလိုကျ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးချပြီး သံဃာချင်း ပြန်နှိပ်ကွပ်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။
နောက် သံဃာတွေအတွက် ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ သာဓကတခုကတော့ ဒယ်အိုးဆရာတော်နဲ့ မေတ္တာရှင်ဆရာတော် နှစ်ပါးကို တရားဟောပြောခွင့် မရအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးဟာ ပရဟိတ အလုပ်တွေကို အားတက်သရော လုပ်နေကြတာပါ။ ဒီတော့ လူတွေအပေါ် သြဇာရှိလာတယ်။ အသုံးချမရတဲ့အခါ တရားဟောဆရာတော်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ရန်သူ ဖြစ်လာတယ်။
ဓမ္မာစရိယ မအောင်ရင် တရားဟောခွင့် မပြုရဘူးဆိုတာ လူတွေအမြင်မှာ ကပ္ပိယယောင်ယောင် ထင်ရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအထက်က ဆရာလုပ်နေတဲ့သူ တယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်ပါပဲ။ ပြောကြစတမ်းဆို သူတို့ သံဃမဟာနာယက ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်မှာရော ကျမ်းပြီးတဲ့၊ ဓမ္မာစရိယအောင်တဲ့ ဆရာတော် ဘယ်နှစ်ပါး ပါပါသလဲလို့ မေးပါရစေ။ နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စတွေမှာ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရားဟောဆရာတော်တွေထဲက သူတို့ခိုင်းတာကို အာခံချင်သူဆိုရင် အမျိုးမျိုး ဖိနှိပ်ပါပြီ။ သူတို့ဆိုတာက သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံကို ချစ်ယောင်ပြပြီး စေတနာရှင်တွေ လှူတဲ့အလှူပေါ် နာမည်ကောင်း ဝင်ယူတတ်သူတွေကို ဆိုလိုတာ။ ဒီလူတွေကပဲ တိုင်းပြည်အာဏာကို ရယူထားကြတာ မဟုတ်လား။
သာသနာရေးဌာနက ဝန်ထမ်းဆိုသူတွေဟာ ကပ္ပိယလိုလိုနဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဆရာလုပ်နေသူတွေပါ။ ထောင်ထွက် သံဃာတွေကို အမှုစီရင်ချက် မိတ္တူနဲ့တွဲပြီး သင်္ကန်းပြန်ဝတ်ခွင့် လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ တကယ်က ဘယ်ဆရာတော် သံဃာတော်ကမှ တီတွင်ပြဌာန်းလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းကြီးရဟန်းဆိုတာ သူတို့ ခွင့်ပြုပြု မပြုပြု ဘုရားဥပဒေအတိုင်း မချိုးဖောက်သရွေ့ သံဃာပါပဲ။ ဘုရားဥပဒေမှာကို သိက္ခာတင် ပဉ္စင်္ဂ၊ သိက္ခာချ ဆဠင်္ဂဆိုတာ ရှိနေပြီးသားပါ။ ဘုရားစကားထက်ကျော်ပြီး ဘယ်ဆရာတော်ကမှ ပြုလုပ်ရဲကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလိုလုပ်လိုက်တာဟာ သူတို့မလိုလားသူ တပါးပါးကို ကန့်သတ်ဖို့ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ဘုရားရဲ့ သာသနာ့ကိစ္စကို သံဃမဟာနာယက က မဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးထံ တင်ပြထားရတာကို ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်။ သတင်းဌာနတခုက မေးတော့ သံဃမဟာနာယကရဲ့ အထက်မှာ သာသနာရေးဝန်ကြီး ရှိနေတဲ့ သဘောလားဆိုတာကို ဟုတ်တယ်လို့ ဖြေခဲ့မိလို့ အောက်ခြေက သာသနာရေးဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ တယောက်က ဆတ်ဆတ်ခါ နာသွားဖူးသေးတယ်။
အကျဉ်းကျဖူးတဲ့ သံဃာဟာ သင်္ကန်းဝတ်ခွင့် ပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီပညတ်ချက်အသစ်ဟာ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် နောက်ပိုင်းမှာမှ ထွက်လာတာပါ။ ရဲရဲအာခံရဲတဲ့ ဦးဂမ္ဘီရလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတော့ တခါခါခေါ်ခေါ်ပြီး နှိပ်စက်တာလောက်ကလွဲပြီး ပညတ်ချက် မလိုက်နာလို့ ထောင်မချရဲတော့ ပြန်ဘူး။ သတင်းစာက ခြိမ်းခြောက်၊ လူခေါ်ပြီးခြိမ်းခြောက်နဲ့ လုပ်နေပေမယ့် သင်္ကန်းဝတ်ခွင့် ပြန်မလျှောက်လို့ ထောင်ပြန်မချတာကတော့ ဦးဂမ္ဘီရကို ကြောက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လိုချင်တာကို ကမ္ဘာက မတားဆီးရေးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ပါ။
အခုချိန်မှာ နိုင်ငံရေးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးနေပါပြီလို့ ကမ္ဘာကို ယုံအောင် အပြသက်သက်ပါပဲ။ တကယ်စေတနာ မပါသေးတာက သေချာပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေတင် နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်စေချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းကို ရသလောက် တားမြစ်နေဦးမှာပဲ။ ကျောင်းသားကို ကျောင်းဆရာကဆင့် နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့ တားမြစ်ဦးမယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုန်းကြီးချင်း အမြင်လွဲအောင် အလုပ်တွေနဲ့ ပညာတွေ ပြနေဦးမယ်။
မဲစာရင်းအမှားတွေ ပေါ်နေတာကိုကြည့်ရင် မရိုးသားသူတွေ ရှိနေတာသက်သေပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေက သူတို့အာဏာကို ထိပါးလာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောလာဆိုလာ (သူတို့အဆို နိုင်ငံရေးလုပ်လာ) ပြီဆိုရင် အရွံမုန်းဆုံးကိစ္စ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ တကယ်က သာသနာ မညစ်နွမ်းစေလိုလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို အစည်းရုံးနိုင်ဆုံးက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ။ ဒီတော့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပြောစကားတချက်ဟာ အာဏာကုလားထိုင်ကို အခြိမ်းခြောက်ဆုံးကိစ္စထဲ ပါနေတာကို သူတို့စိုးရွံ့တာ။
သာသနာကို တကယ်မညစ်နွမ်းစေချင်ရင် ဘုရားပညတ်ထားတဲ့ အကြီးမားဆုံးအပြစ်ကို ကျူးလွန်နေသူ ရဟန်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ချဲထီကိစ္စ လုပ်နေတာလောက်၊ အရက်သေစာ သောက်စားတာလောက်ကို မသိကျိုးကျွံပြုတာ အကြီးမားဆုံးအပြစ် မဟုတ်သေးလို့လို့ ပြောလို့ရပါသေးတယ်။ နိုင်ငံကျော်အောင် အရှက်ရစရာကောင်းတဲ့ လာဘ်စားမှုကြီးတွေ၊ ကျောင်းပြဿနာအမှုတွေ၊ ကပ္ပိယယောင်ယောင် သီလကြောင်တွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်တဲ့ခွင်ကို ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေကနေ သံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်တဲ့ ကိုယ်တော်ကြီးတွေပဲ အနံ့တလှောင်းလှောင်း ထွက်တာမဟုတ်လား။ “ကူဋဝိနိစ္ဆယော လဉ္ဇဂ္ဂါဟော သဗ္ဗေသံ ပါရာဇိကမေဝ” (မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ တံစိုးလက်ဆောင်စား၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ပါရာဇိက အာပတ်သင့်စေသည်) ဆိုတာ ဘုရားဟောထားးတာ သေချာပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကျတော့ အပြစ်မမြင်ဘဲ နိုင်ငံရေးစကားပြောလာသူ ဘယ်ရဟန်းဖြစ်ဖြစ် ရဟန်းမဟုတ်တော့သယောင် ပြောနေကြတာက ဘယ်ပါရာဇိက အပြစ်ကြောင့်ပါလဲလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ တကယ်က သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ သူတို့လိုသလိုသုံးဖို့ ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။
ဆရာတော် အရှင်ဇဝနသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ဥထရက်မြို့ မေတ္တာ ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Wednesday, 28 March 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဘာသာရေးဗဟုသုတ |
အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တွင် ရောက်ရှိနေကြသော ရခိုင်လူငယ်များက စုစုပေါင်းပြီး သမိုင်းပညာရှင် အရှင်ပညာစာရ၏ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေလှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ခိုင်ကပြောသည်။
"အလှူငွေကတော့ ကျပ်ငွေ ၁၁ သိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတွေဆီကနေ စေတနာရှိသလောက် ကောက်ခံပြီးတော့ လှူဒါန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဓိက လှူဒါန်းရတာက ဆရာတော် လုပ်ဆောင်တဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီးတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင် ရွယ်ရည်ပြီး လှူဒါန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။"
အဆိုပါ အလှူငွေအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် စစ်တွေမှ ဆရာတော်တပါးထံမှတဆင့် လွဲအပ် လှူဒါန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
"ဆရာတော်ကျောင်းကနေ ဗမာပြည်ကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ရခိုင်ကလေးငယ်တွေကို ပြန်ခေါ်နိုင်မယ်လို့လည်း ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း ဒါဟာ အင်မတန် ဝမ်းသာစရာ တခုပါ။ ဆရာတော်နဲ့ ထပ်တူ ကျနော်တို့လည်း ပျော်ရွင်မိမှာပါ။" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဆရာတော်အရှင်ပညာစာရအား ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဆရာတော် သီတင်းသုံးနေထိုင်သော စစ်တွေမြို့ရှိ မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်မှ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ထိုနောက် ဆရာတော်အား အလောင်းဖျောက်မှု၊ တရားမဝင်ငွေကိုင်ဆောင်မှု၊ မာတုကာမနှင့် ဖောက်ပြန်မှု စသည့် အမှုပေါင်း ၇မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုကာ ထောင်ဒဏ် ၈နှစ်နှင့် ၃လ ချမှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် သရက်ထောင်မှ သမ္မတ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ဆရာတော်အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ကျောင်းတိုက်ရှိ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာမှ ရခိုင်ကလေးငယ် ၁၀၀ ကျော်ကို ရိုးတောင်ကို ကျော်ပြီး ဗမာပြည်မှ မြို့တချို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဆရာတော် သိမ်းဆည်းစုဆောင်းထားသော ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ အမွေအနှစ် များကို အာဏာပိုင်များက ယူဆောင်သွားကာ ယခုအချိန်ထိ အစအနဖျောက်ထားသည်။
ဆရာတော်သည် သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များကို ပြန်လည် ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ဆက်လက် စီစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျှက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Tuesday, 27 March 2012
မဟာမုနိ ရွှေထီးတော် အသစ်နှင့် အရှုပ်အထွေးများ
ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော် မြတ်ကြီး ကိန်းဝပ်ရာ ကျောင်းဆောင်တော်တွင် အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးမှ ဦးဆောင်ပြီး တင်ဆောင်မည့် ရွှေထီးတော် အသစ်နှင့်် ပတ်သက်ပြီး အရှုပ်အထွေးများ ပေါ်ပေါက်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
"နံပတ် (၁) အချက်က သိမ်တော်ကြီးမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်းသား အစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းလည်တိုင်ကို မဖျက်ပါနဲ့လို့ ပြောတာကို ဖျက်ချပစ်တယ်။ နံပတ် (၂) အချက်က ဒီထီးတော် တင်မယ့် ကိစ္စကို ဒေသအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ အာဏာပိုင်တွေနဲ့သာ ပြုလုပ်နေတယ်။ နံပတ် (၃) က မြေကြီးကနေ ထီးတော်အထိ အမြင့် ၆၄ တောင်ရှိရမယ်။ ဒါကို နှိမ့်ချပစ်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ နံပတ် (၄)က ထီးတော်ကို အရှေ့တောင်ထောင့်က တင်မှာကို အနောက်တောင်ထောင့်က တင်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခါ အခု အသစ်တင်မယ့် ထီးတော်ဟာ အရင် နဂို ထီးတော်ထက် ငယ်လို့ မရဘူး။ ခြေလေးချောင်း သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အရုပ်တွေကို မထည့်ရဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်" ဟု လုံခြုံရေးကြောင့် အမည် ဖေါ်မပြောလိုသူ ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ တစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းပြင် သူက " ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ဓလေ့ထုံးတန်းစဉ်လာအရ ဘုရား၊ စေတီတွေက ထီးတော်တွေကို မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်စေ မြေခပြီးမှ ထီးတော်ကို အသစ် ပြန်တင်ရတယ်။ အခု ထီးတော်က အကောင်းပကတိရှိရဲ့သားနဲ့ ထီးတော်ကို ချပြီး အသစ် ထီးတော်ကို ပြန်တင်ဖို့ လုပ်နေတာဟာ မရိုးသားဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့က လုံးဝ ယူဆထားပါတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြည်သူများအကြား အမြင်အမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်နေပြီး ထီးတော်အသစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထု အကြားတွင်လည်း အမြင်ကွဲပြားနေကြောင်း သိရသည်။ သို့အတွက် ကျောက်တော်မြို့နယ် သံဃာဝန်ဆောင် ဥက္ကဌ သိန်းတန် ဆရာတော်ကြီးအား နိရဉ္စရာမှ လျှောက်ထားမေးမြန်းရာ ဆရာတော်ကြီးက ယခုလို မိန့်ကြားသည်။
မေး- " ဆရာတော်ကြီးဘုရား- အခု အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီး တင်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ရွှေထီးတော်ဟာ ဒေသအတွင်းက ဆရာတော်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တင်ဆောင်ဖို့ လုပ်နေတာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ဘယ်သူ့ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်နေပါလဲ အရှင်ဘုရား- ဖြေကြားပေးပါ"
ဆရာတော်ကြီး-" မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ တင်ဆောင်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက ၀န်ကြီးတွေလည်း ပါတယ်လို့ ကြားတာဘဲ။"
မေး- " ဒါဆိုရင် အခု သိမ်တော်ကြီး အလယ်မှာရှိတဲ့ ကျွန်းသားစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျွန်းတိုင်ကြီးကို ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ အပေါ် ဆရာတော်ကြီး အမြင်ကို သိပါရစေ။"
ဆရာတော်ကြီး- " အခု ဆရာတော်ကြီး သိရသလောက် ကျွန်းတိုင်ကို ဖြိုချ ဖျက်ဆီးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်းတိုင်ကို စတီးလ်ကွပ်ပြီး ပိုပြီး ခိုင်ခန့်အောင် လုပ်တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားသည်။
စကား ပြောနေစဉ် ဖုံးပြတ်သွားသဖြင့် ဆရာတော်ကြီးအား ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့တော့ပါ။
၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် မဟာ မုနိ ကုန်းတော်အနီးတွင် တည်ရှိသော သရက်တပင် ဆရာတော်အား ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ဆရာတော်က ယခုလို ပြောသည်။
" ဦးဇင်းက မဟာမုနိ သိမ်တော်ကို နေ့တိုင်း ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အတွက် ကျွန်းသစ် ပန်းလယ်တိုင်ကို လဲချလိုက်ပြီလား။ အသစ် ပြန်လုပ်ပီလား ဆိုတာကို တိတိကျကျ မသိဘူး တကာကြီး" ဟု ပြောသည်။
ယခုကိစ္စမှာ အမျိုးဘာသာ သာနာကိစ္စ ဖြစ်ပါသဖြင့် မဟာမုနိ ရွှေထီးတော် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရသလောက် ပြည်သူများ သိရှိရန် ပြောကြားပေးပါဟု လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်က ယခုလို မိန့်ကြားသည်။
" အခုက လူတွေကြားထဲမှာတော့ အမျိုးမျိုး ကိုယ်ထင်ရာကို ကိုယ်ပြောနေကြပါတယ်။ အခု အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီး လုပ်နေတာတွေကလည်း တစ်ဘက်က ကြည့်ရင် စနစ်တကျနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ဘုံအဆင့်ဆင့် လုပ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲသလို လုပ်တာကို တစ်ဘက်ကလည်း အမျိုးမျိုး ပြောဆို နေကြတာတွေ ရှိပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
မေး- " အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးက ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ မဟာမုနိ ထီးတော်ကြီးကို ဒေသအတွင်းက ဆရာတော်ကြီးတွေ အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲချက်တွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ် အရှင်ဘုရား။"
သရက်တပင် ဆရာတော် " ဒါကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေသအတွင်းက ဆရာတော်ကြီးတွေ၊ ဒေသခံ လူကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြုလုပ်တာ မရှိဘူး။ အစိုးရပိုင်းက လူကြီးတွေနဲ့သာ လုပ်နေတာကို တွေ့ရ ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
မေး“ ဒါဆိုရင် အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးက တင်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ ရွှေထီးတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ အရှင်ဘုရား”
သရက်တပင်ဆရာတော်" သူလည်း အမျိုးဘာသာ သာသနာကို အကျိုးယုတ်အောင်တော့ လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ လူတွေကတော့ ကိုယ်ထင်တာကို ကိုယ်ကောက်ပြောနေကြတာပါဘဲ။ ရွှေထီးတော်မှာ ဘာတွေ ပါတယ်။ မပါဘူးဆိုတာလည်း ဒီကိုရောက်မှ သိရပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ ဘာမှ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ပွဲကတော့ စည်ကားမယ်ထင်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ နောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းများ အရ ပြည်သူများ တောင်းဆိုချက်အရ ရွှေထီးတော် အမြင့်အား မြေကြီးမှ စိန်ဖူးတော်ထိ ၆၄ တောင် ထားရှိမည် ဖြစ်ပြီး ရွှေထီးတော်ကိုလည်း ယခင် ထုံးတန်း စဉ်လာအတိုင်း အရှေ့တောင် အရပ်မှ တင်ဆောင်သွားဆောင်ရန် စီစဉ်ထားကြောာင်း သိရသည်။
အလေးချိန် ၁၁ ပိသာ ၅၀ ကျပ်သားရှိ ရွှေထီးတော်ကို ရန်ကုန်မြို့မှ စစ်တွေမြို့ သို့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ယူဆောင်လာပြီး စစ်တွေ အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက်တွင် အပူဇော်ခံနေရာ ရွှေထီးတော်အား ပြုလုပ်ရာတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ ဦးဇင်း ဘီလူးခေါ် အရှင်ကုမာရအား ရွှေထီးတော်တွင် မည်သည့် အရုပ်များကို ရေးထိုးထားပါသလဲဟု လျှောက်ထား မေးမြန်းရာ ဦးဇင်းက ယခုလို ဖြေကြားသည်။
"မဟုတ်ပါဘူး တကာ့။ ဒါတွေက ကောလဟလတွေပါ။ ဒီမှာက သဇင်ပန်းပါတယ်။ ရခိုင်ဗျာလ်လ ရုပ်ပါတယ်။ သီရိဝစ္စ ရခိုင်တံဆိပ်ပါတယ်။ ငှက်မြတ်နားမှာလည်း ငှက်မြတ်နားနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ ပါတယ်။ ခြင်္သေ့အရုပ်၊ ကျားအရုပ် ပါ တယ် ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားနေတယ်" ဟုပြောသည်။
ယခု ရွှေထီးတော်မှာ အချင်း (၄)ပေ (၆)လက်မ၊ အမြင့် (၉)ပေ ကျော်ခန့်ရှိ ရွှေသား ရွှေစင်များဖြင့် အကျော်အမော် ဗိသုကာပညာရှင်တို့ အကောင်း ဆုံး ဖြစ်အောင် စီမံပြုလုပ်ထားသော ရွှေထီးတော် ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၆ ရက် တန်ခူး လပြည့်နေ့တွင် တင်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇင်းမှ ပြောသည်။
ရွှေထီးတော်အား ယခင် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်မှူးချုပ် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့် လက်ထက်ကတည်းက တင်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ဦးခင်ညွှန့် အလုပ်မှ ပြုတ်သွားသဖြင့် ရပ်တန့်သွားခဲ့ရာမှ ယခုမှ ပြန်လည် တင်ဆောင်ရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မဟာမုနိ ထီးတော် အဟောင်းအား ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကတည်းက မြေအောက်ကို ချထားပြီး အဆိုပါ ထီးတော်ရှိ စိန်ဖူးတော်မှ ရှေးဟောင်း တန်ဖိုးရှိ စိန်တစ်လုံးမှာလည်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့် ဘုရားဂေါပက အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ စိန် မည်သည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း မသိရှိဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း ရခိုင်သမိုင်း သုတေသီက ပြောကြားသွား သည်။